नेपालको आज तेस्रो अभ्यास खेल, कति बेला र कोसँग ? – Everest Dainik – News from Nepal
नेपालको आज तेस्रो अभ्यास खेल, कति बेला र कोसँग ?
काठमाडौँ, साउन ९ । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले आज तेस्रो अभ्यास खेल खेल्दै छ। इंग्ल्यान्डको लर्ड्समा हुने त्रिकोणात्मक टि-२० सिरिज र नेदरल्याण्डसंगको एकदिवसीय क्रिकेट खेलका लागि युरोप टुरमा रहेको नेपालले इष्ट लन्डन ११ विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो।
एकदिवसीय अभ्यासका रुपमा रहने यो खेलअपरान्ह पौने ४ बजे सुरु हुँदै छ। यसअघि नेपालले ५० ओभरको पहिलो अभ्यास खेलमा ह्यामसायर होग्सलाई २ सय ४३ रनले हराएको थियो।
नेपालको जितमा कप्तान पारस खड्काले १ सय ६१ रनको शतकीय इनिङ खेलेपनि दोस्रो अभ्यासमा भने उनी टिममा देखिएनन्। टि-२० पहिलो अभ्यासमा नेपाल १९ रनले पराजित भएको थियो।
अन्तिम अभ्यास खेलमा नेपालले इस्टलन्डन शार्कसंग भोली टि-२० खेल खेल्दै छ। उक्त अभ्यास खेलपछि नेपालले क्रिकेटको मक्का मानिने इंग्ल्यान्डको लर्ड्समा जुलाई अन्तिम साता हुने त्रिकोणात्मक टि-२० सिरिज खेल्ने छ।
एकदिने त्रिकोणात्मक सिरिज अन्तर्गत नेपाल र नेदरल्याण्डबीचको खेललाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसीसीले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिईसकेको छ। सिरिजमा एमसिसीको कप्तानी श्रीलंकाका पुर्व क्रिकेटर महेला जयबर्धनेले गर्ने छन्।
यस्तै स्कटल्याण्डका डायलन बज, एलास्डर ईभान्स र मार्क वाटले पनि एमसिसीबाट नेपाल विरुद्ध प्रतिष्पर्धा गर्दे छन्। नेपाल र नेदरल्याण्डबीचको एकदिवसीय सिरिज अगस्ट १ र ३ मा हुनेछ।
ट्याग्स: Nepali national cricket team, इष्ट लन्डन ११